DABAGALKA WARKA: Dagaalka Somaliland & Puntland maku ekaan doonaa deegaanka Tukaraq, Mise ku joogsan doonaa si fudud? – Puntlandtimes
DABAGALKA WARKA: Dagaalka Somaliland & Puntland maku ekaan doonaa deegaanka Tukaraq, Mise ku joogsan doonaa si fudud?
May 25, 2018 W LAASCAANO
LAASCAANO(P-TIMES) – Shaki ma saarna in dhinacyada Somaliland & Puntland ay hadda wali gacmaha kula jiraan abaabulka dagaalo cusub oo markale ay ku dagaalamaan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, ka dib labo dagaal oo dhacay shalay iyo 15-kii bishan, kuwaas oo khasaaraha ka dhashay oo kor u dhaafayo dhaawacyada Boqolaal dhinacyada dagaalamayey ah.
Puntlandtimes.com waxay ogaatay in miisaaniyad xoog badan ay labada dhinacba uga baxayso dagaalkan, isla markaasna lacagahaas ay yihiin kuwii ugu adkaa ee ay labada maamulba u adeegsadaan arrimaha dagaalo dhexmara waligood.
Dagaalkan ayaa ku bilowday markii Somaliland uu tartankii doorashaa ku galay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu tagi doono xaduudihii Gumeystihii UK, oo lagu murmi doono caasumadnima magaalada Garoowe.
Taasi waxay fariin colaadeed oo uga timi Puntland dhinaca magaalada Hargeysa, balse ma aysan u qaadin ficil iyo arrin loo bedeli karro mid xaqiiqo ah, ilaa bilowgii sannadkan Muuse Biixi Cabdi amray in weerar lagu qaado deegaanka Tukaraq oo ay joogeen ciidamada Difaaca Puntland, xili uu Garoowe booqasho ku joogay Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Puntland ayaa kala hadashay beesha Caalamka in laga baaqsado dagaalo dhaca, isla markaasna labo goor ayuu ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating howshan xalinteeda isku dayay, halka Madaxweynaha Puntland uu aqbalay dalabyo uga yimi Isimo iyo waxgarad ka codsanayey in aysan ciidamadiisu wax dagaal ah qaadin.
Madaxweynaha Puntland ayaa bishan gudaheeda u sheegay ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya mar uu safar ku yimi Garoowe, in ay ciidamadiisu ku joogaan hab nabdeed, balse aysan u dulqaadan doonin Daan-daansiga uga yimi Somaliland, loona baahan yahay in gabi ahaanba ciidamada Hargeysa laga saaro xaduudaha Puntland oo ay dib ugu laabtaan deegaanadoodii.
Somaliland wey diiday dalab kasta oo la xariiray arrimaha nabadda, gaar ahaana mid ay wadeen Isimo uu kamid yahay Boqor Maxamuud Aw Cismaan Buurmadow oo xabsi u galay, markii uu ka hadlay in la joojiyo dagaalka Tukaraq, Madaxweynaha Puntland-na uu ka aqbalay dalabkaas.
Muuse Biixi oo ahaa Jamhad kasoo biyo-cabay Xukuumadii Kacaanka iyo Jamhadii SNM ayaa u muuqda mid u ooman daadinta dhiigga Ummadda Soomaaliyeed iyo in dib loo celiyo nabadda, daganaanshaha ka hana qaaday dhulka loo doortay ee Somaliland.
Dagaalkii cuslaa ee shalay dhacay ayaa si rasmi u garowsiiyey Muuse Biixi xaaladda dagaalka Tukaraq, waxaana fariin uusan fileyn uu ka helay Taliyihiisa ciidamada Nuux Taani oo si cad ugu sheegay in ciidamadiisu aysan awood dheeraad ah u yeelan Karin weerar kale oo uga yimaada dhinaca Puntland, haddii aan la helin maleeshiyaad cusub oo deg deg ah.
Kasokow qasab in Askar looga dhigo dhalinyaradda, waxaa haddana muuqata in ay Somalilan dareentay xaaladda rasmiga ah ee taagan, ayna ka shaqeyn karto qar iska xoornimo ay markale duulaan ku qaado dhinaca Puntland, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo.
Ma badna rajada laga qabi karro in laga baaqsado dagaalo mar kale ka dhaca deegaanka Tukaraq iyo guud ahaan gobalka Sool, waxaase sii kordhaya walaaca laga qabo dagaalka oo sii xoogeysta iyo weerarada Muuse Biixi iyo Jamhadiisu ay wadaan oo sii kordha.
Xaaladda ayaa sii kordhaysa, lamana filayo in baaqyada iyo wararka kasoo baxaya Beesha Caalamka ay xal rasmi ah u noqdaan joojinta dagaal ka dhaca gobalka Sool, waxaana falanqeeyaasha la socda xaaladda gobalkaas ay sheegayaan in ay sii kordhayso dhiilada colaadeed ee kataagan Jiidaha dagaalka.
Kadib markii lagu kala baxay dagaalkii Tukaraq ee maalintii shalay ayaa magaalada Garoowe uu ka bilaabmay Guux aad u weyn kaas oo Beesha Maxamuud Saleebaan Dhexdeeda ay isku eedaynayso Fashilkii Dagaalkii Shalay.
Gooxan oo si weyn uga dhex socday Beesha Cumar Maxamuud oo iyagu malintii shalay ahaa kuwii safka hore kaga jiray dagaalka kadib markii ay u niyaysteen in ay soo qabsadaan Kaarihii lagu ilaalin jiray Airportka magaalada Gaalkacyo.
Dagaalkan oo Beesha Cumar Maxamuud ay si weyn u gashay kuna qaaday fadhiisimihii Ciidanka Ina Caambashe halkaas oo loogu tilmaamay in ay yaaliin hubki dagaalkii hore lagaga qabsaday.
Beesha Cumar Maxamuud ayaa guul daradii dagaalkii shalay u xambaarisay Jimcaale oo isagu ah ninka hogaamiya ciidanka Beesha Ciise Maxamuud. Besha Cabdiwali Gaas ayaa ku eedaysay Jimcaale in uu uga baxay dagaalka markii uu aad u kululaaday taas oo sababtay in Beesha Cumar Maxamuud ay dagaalkii shalay ku weydo Rag iyo Gaadiid Dagaal halka lagu qafaashay rag door ah.
Iskusoo wada duuboo ka bixida Jimcaale ayaa Beesha Gaas ay si gaara inuu ka danbeeyay farta ugu sii fiiqayaan Cabdiraxman Faroole oo si dadban u maamula ciidanka Jimcaale.
Ololihii iyo dardargelintii dagaalka si fcn eyeey u socotay lkn muuse shaaniyow shimashii beesha m Cumar maxamuud aadka ugu lee,deen waa wax lagaaga dambeeyo ogoow kaarahaasna ka harimayno boowe ku dabadhilifiinta JAAMAC SIYAADKA U badana waynoo taalaa muuse dhiigyo cab waligiis sidaas idiin ma ag joogi doono inaan idinka aargoosanaa tii shalay iyo tii horeyba